A2Z Khabar – Just another WordPress site
A2Z Khabar Just another WordPress site
यस्ता छन् भुइँकटरका फाइदा
तपाईलाई पाइल्स छ ? एक महिनामै ठिक हुन मुला खानुहोस्
बजार होस् या गाउँ, साङ्लाले सताएर हैरान बनाएको छ, यी घरेलु उपायबाट अपनाउनुस् र पुरै छुटकारा पाउनुनुहोस्
3 days ago	यौन जिज्ञासा 0
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन । त्यसले गर्भको शिशुलाई कुनै असर पुर्‍याउँछ ? गर्भावस्था एउटा विशेष अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्न नमिल्ने हुँदैन । शाल पाठेघरको मुखमा रहेको अवस्था, रक्तश्राव हुने जटिलताहरू भएको अवस्था तथा जोखिममा रहेको गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क गर्न मिल्दैन । यौन सम्पर्कले गर्भस्थ शिशुमा कुनै …
2 weeks ago	स्वास्थ्य 0
२ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टोरल ठीक गराउँछ । गोरस मुटुरोगमा समेत लाभदायक रहेको तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, …
3 weeks ago	स्वास्थ्य 0
भुइँकटर एकमात्र यस्तो फल हो, जसमा धेरै समस्याका समाधान गर्ने तत्वहरु पाइन्छ । साथै भिटामिन तथा पोषण पनि पाइन्छ । भुइँकटर मन नपराउने कम नै हुन्छन् । भुइँकटर खानुका फाइदा हामी सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । यस्ता छन् भुइँकटरका फाइदा भिटामिन सिले हाम्रो शरीरमा धेरै फाइदा दिन्छ । भुइँकटरमा …
3 weeks ago	भिडियो 0
छ वर्षीया बालिकाको स्वरमा राष्ट्रिय गीत रेकर्ड गरिएको छ । साहित्यकार प्राध्यापक मोहन ज्ञवालीको शब्द तथा मोहन मगरको संगीत रहेको ‘संसारमै अग्लो छ मेरो देश नेपाल’ बोलको राष्ट्रिय भावनाको गीतमा छ वर्षीया बालिका अनन्नीया ज्ञवालीले स्वर दिएकी हुन् । अनन्या हाल नवोनित टड्लर्स जोन स्कुल कुलेश्वरमा कक्षा १ मा अध्ययनरत …
३० असोज, काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भदौ ०७२ देखि मालपोत कार्यालयमा एकीकृत अनलाइन रजिष्ट्रेसन प्रणाली सुरु गर्‍याे । कागजी तथ्यांकका ढड्डा राख्ने परम्परागत अभ्यास विस्थापन हुने उक्त प्रणालीको थालनी भयो, मालपोत कार्यालय कलंकीबाट । जग्गा अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) नाम दिइयो, त्यसलाई । उक्त प्रणाली विस्तार गरेर …
शाकाहारी भोजन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । मासु खानेहरुमा भन्दा मासु नखाने मानिसहरुमा विभिन्न खाले रोगहरुको समस्या कम देखिने गरेको विभिन्न अध्ययन तथा अनुभवले देखाएका छन् । यदि तपाइँ मासु खानुहुन्छ र अबदेखि मासु छाडेर शाकाहारी बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँले आफ्नो वजन घटाउने, मुटुरोगको जोखिम कम गर्ने जस्ता फाइदाहरु …
घरमा ओसको मात्रा बढी हुँदा साङ्लाहरुलाई सजिलो हुन्छ । साङ्लाहरुको बास नै भान्सामा खाने कुरा भएको ठाउमा हुने गर्दछ । साङ्ला भगाउन या मार्नका लागि बजारमा थरिथरिका रसायनिक औषधि पाइन्छन् । तर यी औषधीहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन् । घरमा साना बच्चा छन् भने रासायनिक औषधि होइन, घरेलु उपाय नै …
Powered by A2Z Khabar